IMandalas🥇 Faka futhi ujabulele kusuka kuMandalas.wiki
Mandalas Yimiklamo eheha abantu abaningi futhi eletha izinzuzo engqondweni. Okokuqala, kuyadingeka ukwazi ukuthi ukudala imidwebo ngokuma kwendilinga kuyinto endala kakhulu.
Amarekhodi okuqala ama-mandala avela ngekhulu lesi-XNUMX, esifundeni saseTibet. Ukusakazwa nakwamanye amazwe amaningi aseMpumalanga, njengeNdiya, iChina kanye naseJapan Kuzo zonke izindawo igama elithi mandala lithi isisho esisuselwe kusi-Sanskrit , okusho indilinga. Ngokuvamile zisetshenziselwa amasiko enkolo noma njengendlela yokuhlushwa ngesikhathi sokuzindla.
Kulesi sihloko uzofunda kabanzi ngomlando walobu buciko basendulo obuqhubeka kuze kube yilolu suku futhi uthole ukuthi yiziphi izinzuzo zomzimba nengqondo. Futhi ngoba kujwayelekile ukuthola izincwadi ukuze Umbala namathambo ezimele izinhlobo ezahlukahlukene kakhulu ze-mandala.
IsiMandala yigama elivela olimini lwesiSanskrit, oluthathwa njengolufileyo futhi lisho indilinga. Kodwa-ke, nanamuhla, iSanskrit ithathwa njengenye yezilimi ezingama-23 ezisemthethweni zaseNdiya, ngenxa yokubaluleka kwayo kobuHindu nobuBuddha.
Ngakho-ke, ama-mandala yimiklamo ye- bobunjwa bejometri . Lokho wukuthi, bakhula besuka enkabeni efanayo. Kusukela ekuqaleni, imidwebo ibizwa yantras , okuyigama elisuselwa ezilimini ezikhulunywa enhlonhlweni yaseHindustani ngensimbi yomculo. Okungukuthi, ama-mandala ziyindlela yokufeza inhloso ethile hhayi umgomo uqobo.
Le nhloso ehlosiwe ishintsha ngokuya ngamasiko ngamunye lapho kugcinwa khona. Eziningi zazo, ama-mandalas asebenza njengendlela yokuhlushwa ukuzindla. Ukungabi ukugxila kuphela kumafomu, kepha ukwakhiwa komdwebo obaluleke kakhulu.
Umumo ungadalwa ngezinto ezahlukahlukene, kepha zihlala zinemibala egqamile. Indlela ejwayelekile yokwakha ama-mandalas ukudlula okinki abemibala ephepheni noma ngendwangu. Kodwa-ke, amanye amathempeli amaBuddhist agcina isiko lokwenza ama-mandala ngensimbi noma ngokhuni.
Kukhona enye indlela yokwenza ama-mandala akhetheke nangaphezulu, okwenziwa izindela zamaBuddha kwamanye amathempeli emhlabeni jikelele. Kula mathempeli, izindela zifunde ubuciko bokwenza ama-mandala nge isihlabathi esinemibala phakathi neminyaka. Umdwebo ungathatha amahora noma izinsuku ukuwuqedela futhi lapho umdwebo usuqedile ubhujiswa ngokushesha. Yilapho kuphela lapho okusetshenzisiwe kulahlwa emfuleni. Lobu buciko busetshenziselwa ukumela ukuthi yonke into empilweni idlula ngokushesha.
Zadalelwa kuphi futhi nini?
Amarekhodi okuqala endalo ye-mandala aqala emuva Ikhulu lesi-XNUMX, esifundeni lapho kutholakala khona iTibet . Kusukela ekuqaleni, imidwebo yayisetshenziswa enkolweni yamaBuddha njengendlela yokugxila nokusiza ekuzindleni.
Esikhathini esifanayo ama-mandala nawo atholakala ezifundeni zaseNdiya, eChina naseJapane kamuva, kanjalo, hhayi eBuddhism kuphela, kodwa nakumaHindu ngisho naseTaoism, lapho izimpawu ze-yin ne-yang zibhekwa njenge-mandala .
Kodwa-ke, zonke izinkolo ziphatha izithombe njengezinto engcwele , okuvame ukumela indingilizi yempilo. Kwezinye izici zobuBuddha, ama-mandala akhonjiswa njengezigodlo zonkulunkulu ngakho-ke angcwele.
Kodwa-ke, yize amarekhodi okuqala asemthethweni aqhamuka eMpumalanga, kwatholakala ukuthi abomdabu bezwekazi laseMelika babesebenzisa ubujamo bejiyometri obugxile emasikweni. Ikakhulukazi ezinkolweni ezihlobene nokuphulukiswa. Phakathi kwekhulu le-XNUMX nele-XNUMX, isonto laqala ukusebenzisa imidwebo ku- ubuciko obungcwele nengilazi enamabala ku importantes izakhiwo .
Ngesikhathi esifanayo, umqondo we-alchemy wasakazeka, lapho amakhulu ososayensi befunda izindlela zokuguqula izinto. IMandalas nayo yafakwa kulokhu, ngoba imidwebo ivela emibhalweni eminingi ye-hermetic eyabhalwa ngaleso sikhathi. Ngakho-ke, kuyaziwa ukuthi abantu bebelokhu benokuthakazelisa okuthile ngendlela okwakhiwa ngayo imidwebo, okuqhubeka kuze kube namuhla.
Njengoba sekushiwo, ukuhunyushwa ngokwezwi nezwi kwegama elithi mandala kusuka olimini lwesiSanskrit yi- indilinga. Lo mbuthano usetshenziswe amakhulu eminyaka njengo ukumelwa kokuhamba kwempilo noma ngisho nezigodlo zonkulunkulu okufanele zikhulekelwe. Kodwa-ke, lokhu kungahluka kuye ngamasiko.
Isibonelo, kubuHindu ubu-mandala busetshenziselwa ukumela impilo ngokuya ngemiklamo yendawo yonke. Lapha, bamele ukuhlanganiswa nokuzwana kukho konke okudingeka kwenziwe.
KubuBuddha, banamandla izinsimbi zokuzindla njengoba zinekhono lokudonsela ukunakekela ekubunjweni nasemibala yazo. Enkolweni zisengasetshenziswa ukumela ubufushane bempilo, lapho zilungiswa ngesihlabathi kanye nokuhlala konkulunkulu.
Ngokwesiko lamaTao, ifilosofi ye-yin yang isebenzisa ukumelwa kwayo kwe-mandala. Lapha, ukuhlangana kwezimpawu ezimbili kwakha okuphelele futhi kumele ibhalansi okufanele igcinwe kuzo zonke izici zokuphila. Emadolobheni angaphambi kwekoloni, noma kunjalo, kunezinkomba zokuthi imidwebo yayisetshenziswa emicimbini yokwelapha.
Yiziphi izinhlobo zamandala ezikhona?
Njengoba sekushiwo, izinto ezahlukahlukene zingasetshenziselwa ukwakhiwa kwama-mandalas. Ngale ndlela, ngalinye limelela okuthile okuhlukile, njengempilo yomuntu noma inhlalakahle, lapho isetshenziswa njengesipho somunye umuntu. Bheka lapha izinhlobo eziyinhloko zama-mandalas nokuthi zenzelwe ini.
Ama-mandala esihlabathi ayisiko phakathi kwezindela zaseTibetan. Kulobu buciko, imidwebo yenziwa phansi ngesihlabathi esinemibala futhi kuyinto yendabuko emasikweni amaBuddhist.
Ngaphambi kokuqala ukudala ama-mandala esihlabathi, izindela sezifundile amasu iminyaka eminingi futhi zenza izinsuku zokuzindla kusengaphambili ukuzilungiselela. Umsebenzi uvame ukuthatha amahora ukuzilungiselela futhi ekugcineni yonke into iphonswa emfuleni noma komunye umthombo wamanzi asebenzayo.
Umqondo ukumela i- ubufushane bazo zonke izici zempilo , ngoba konke kuzophela ngehora. Ngalo mqondo, zimelela okusha qala njengoba kuhlale kwenzeka ukudala ukwakheka kwesihlabathi esisha.
Esinye isibonelo sesiko lamaBuddha ngama-mandala enziwe ngezinto ezifana nokhuni noma i-iron. Lapha bangathatha ukwakheka kobukhulu obuthathu futhi basetshenziswa ngokujwayelekile njenge ukumelwa kwekhaya likankulunkulu othile.
Zisetshenziswa kabanzi njengezipho. Ngalo mqondo, inqubo ilawulwa ngamasiko namasiko ahlukahlukene, okusho ukuthakazelelwa, ngoba kuhle ukwamukela imandala njengesipho esivela kothile.
Ngokwesiko lamaHindu kujwayelekile ukuthola ama-mandala aqoshwe emathempelini ahlukahlukene nakwezinye izindawo ezingcwele. Imibala ekhanyayo isetshenziswa kulezi zindlela, okuvame ukuba njalo bamele okuhlukahlukene chakras womzimba komuntu. Ngokwesiko lamaHindu bafana nezikhungo zamandla, ezisakazeka emzimbeni wonke womuntu.
Ngale ndlela, umbala wemibala esetshenziswe kwimidwebo kungaba yindlela yokuhlela kabusha lawa ma-chakras futhi uvumele ukusakazwa kwamandla okungcono. Ngakho-ke kuqinisekiswa ukuthuthuka komqondo wokuphila ngokomoya nangokwenyama.
Ungayidweba kanjani imandala ekhaya?
Amakholi afunda iminyaka ukudala ama-mandala anemibala eyinkimbinkimbi. Kodwa-ke, ngokuzijwayeza okuncane kungenzeka ukumunca izinzuzo zalobu buciko, ngaphandle komsebenzi omningi kangaka. Ukuze wenze lokhu, ungadweba ubujamo bakho ngokulandela izeluleko ezithile ezilula ngisho namavidiyo ku-YouTube.
Okokuqala, udinga ukudweba umbuthano ephepheni, njengoba i-mandala ngokwezwi nezwi isho "indingilizi". Kufanele uqaphele ukuthi umdwebo uphelele ngangokunokwenzeka ', ngoba ungasebenzisa i- ikhampasi noma ipuleti. Kungaleso sikhathi kuphela lapho kuzokwazi ukuthola umphumela omuhle wokugcina.
Kulandelwe umbuthano, udinga ukuthola okuphakathi bese udweba umugqa. Bese udweba omunye umugqa oqondile bese uqhubeka nokwenza lokhu uze uthole okwanele. Le imodeli eyisisekelo yawo wonke ama-mandala ofuna ukuwakha. Ukusuka lapho, vele usebenzise umcabango wakho bese ufaka iminsalo, izimbali, ubujamo bejometri, namagama.
Kepha khumbula, kufanele babe nencazelo yomuntu siqu kuwe futhi kufanele uzinikele ngokuphelele kulowo mkhiqizo. Lapho umdwebo usuqedile, mane uwufake umbala, usebenzisa imibala ekhanyayo, ekhanyayo.
AmaMandalas ukufaka umbala ☸️
IMandalas isibe ngundabuzekwayo emhlabeni jikelele. Ngakho-ke, kunezinketho eziningi zemidwebo elungile nezincwadi zokubala. Lokhu kwenza abantu abaningi bakhethe ukwenza lokhu lapho bezama ukuthola ukuphunyuka ezinkingeni zansuku zonke. Uma ungenaso isikhathi noma ikhono lokwenza ama-mandala akho, nayi eminye imidwebo ongayiphrinta upende ekhaya. Hlola.
Ingabe kukhona izinzuzo zangempela zokuklama ama-mandalas?
Yebo, ama-mandala asetshenziswe amakhulu eminyaka njengendlela yokuthuthukisa ukugxila futhi anenzuzo yangempela. Ngalokho, ukudweba izithombe kungasiza ekunciphiseni ukukhathazeka nokucindezeleka . Ngakho-ke ukufaka isandla ekuthuthukiseni ikhwalithi yempilo.
Elinye iphuzu elihle ngama-mandalas ukuthi ngenxa yokuchema kwabo ngokomoya, bangasiza kakhulu kunoma ngubani ofuna ukukhanyiselwa. Kulabo abafuna nje umdlalo wokuzilibazisa omusha, bangaba ukuqeqeshwa okuhle emakhono okudweba nokudweba.